I-Wholesale Natural aromatherapy yokhuni iwikhi enephunga le-soy ikhandlela ifektri nabakhiqizi |Winby
☞Sinikeza amakhulukhulu amakha, ungakhetha ohlwini lwamakha.
☞Uma uthanda usayizi omkhulu, ungaxhumana nathi, futhi ngingakunikeza.
☞Uma ufuna ukwenza ngokwezifiso ilogo yakho, xhumana nathi, singakuklama isampula kuqala ukuze uthole ireferensi yakho.
I-OEM etholakalayo yesitsha sengilazi I-Aromatherapy yokhuni ifaka amakhandlela anephunga elimnandi le-Soy Wax
Leli khandlela le-glsss elinephunga elimnandi lenziwa ngengcina yesoya yemvelo, iwikhi yokhuni kanye nesitsha sekhandlela lengilazi ye-matte.
Mayelana ne-wax, ungakhetha 3%, 5%, 8%, 10% iphunga.Futhi umbala we-wax ungenziwa ngokwezifiso njengezimfuno zakho.
Okwesibili mayelanaizinto zokusetshenziswa zekhandlela elinephunga elimnandi,sisebenzisa i-wax kapharafini, i-soy wax, i-wax yezinyosi kanye nezinye izitshalo ze-wax njengempahla eluhlaza emakhandlelani.I-wax yesoya ingalayisha u-10% wamafutha abalulekile futhi inikeze ukuphonswa kwephunga elimnandi.Futhi ingcina yesoya ayinazo izithasiselo zamakhemikhali noma odayi.
Okubalulekile Imbiza yengilazi e-matte + i-soy wax/i-parafini wax + iwikhi yokhuni+isivalo soqalo
Isisindo se-wax 270g
Isisindo esikhulu 650g
Okwedlule: Isiqukathi se-soy sokunethezeka sangokwezifiso amakhandlela anephunga elimnandi ezitsheni zengilazi
Olandelayo: Ikhandlela le-wax ye-soy enephunga elimnandi
ikhandlela lentambo yokhuni
ikhandlela elinephunga elimhlophe elifuthwe ngokwezifiso
A07M Amakhandlela Engilazi Efriziwe Emnyama Anephunga Lamakhandlela ane-P...
I-P20F P21F Isitolo esidayisa yonke impahla esizimele esiyisikwele se-b...
Ilebula yesitayela sokudweba Amafutha we-D08T enamakha amaningi Yan...